Buyekeza: "Izwe Lamaphupho", nguJames Nava | Izincwadi Zamanje
Iphupho Kuyinoveli yesithathu engiyifunde nguJames Nava. Omele umshicileli Izincwadi zeSniper eSpain wayenomusa ngokwanele ukuba angithumele yona, kanye nezinye izincwadi zombhali. Ababili babo, Impisi empunga y Umenzeli ovikelwe Sengivele ngiyifundile, futhi ngabelana ngemibono yami nawe. Empeleni, Iphupho yinoveli yesihlanu kaNava. Le ndaba, yathuthukiswa ngaphezu kweminyaka eyishumi, ekugcineni yabona ukukhanya ngo-10.
Nakulokhu futhi, uNava wethula indaba ekhuthazayo, ejabulisayo, enamandla futhi enesifiso. Vuliwe Iphupho ayinayo imfucuza noma inothi lokugcina lombhali. Kepha Iphupho kungaphezulu kakhulu: kuyi- indaba yokuzithuthukisa nokulwa nobunzima, njengoba uNava asho embhalweni wokugcina oshiwo ngenhla. Futhi kuyindaba lapho kuvivinywa khona amanani abalulekile njengobungane, ukwethembeka, ukuziqhenya, ubuholi nokuziphatha. Ngaphandle kwamalayisense okubhala umbhali awathathayo, le noveli ingaphezu kwencwadi yokujabulela ukufunda: iyinoveli okufanele uzindle ngayo.
1 Indaba ngokuzithuthukisa nokulwa nobunzima
2 Usongo lobuphekula abhekane nalo
3 Ukufundelwa ukujabulela
Indaba ngokuzithuthukisa nokulwa nobunzima
I-Land of Dreams ilandisa ngabadlali ababili, uTim Bradock noSamantha Davis, izimpilo zabo ezihlangana ngesikhathi esibi kunazo zonke ezimpilweni zabo, ikakhulukazi kuye. Ungumuntu odlala ngokushibilika eqhweni futhi ungumdlali. Bobabili babelana ngephupho elifanayo: igolide le-Olimpiki. Futhi balwe kanzima ukuze balungele ukufeza inhloso yabo.
Kodwa-ke, impilo nesiphetho bekufuna ukubeka isithiyo esibonakala singenakunqotshwa. Lapho behlangana, uSamantha uyalulama ekulimaleni kweqakala angazi ukuthi kuzomvumela yini ukuthi abuyele emuva ekushibilikeni ngokusebenza kwakhe okuphezulu. Lokhu kulimala kungumphumela wenkinga yakhe yangempela: izinzwa ngokuncintisana.
Into kaTim iyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Ngaphambi nje kokuncintisana kuma-Olimpiki, umkhondo nensimu ethembisayo isengozini yomgwaqo. Akekho umuntu okunika ithemba elidlula ukuhlala esihlalweni esinamasondo impilo yakho yonke.
UTim noSamantha basemtholampilo okuwukuphela kukadokotela obanikeze bobabili ithemba lokuthi bazolulama ekulimaleni kwabo. Ngalesi sikhathi izindaba zihlangene zibe yinto eyodwa. Futhi ngokubambisana balwela ukufeza amaphupho abo, ngomzamo, ukubekezela nobuhlungu, ukuncika komunye nomunye.
Usongo lobuphekula abhekane nalo
Kepha abashadikazi bezemidlalo abagcini nje ngokulwa ukuze banqobe izinkinga zabo zomzimba futhi, endabeni kaSamantha, nezinkinga zengqondo. Kusongelwa izinsongo eziningi zamaphekula ezibabeka ethubeni lokumela amanani esizwe sonke. Bangakhetha: ukuhoxa nokugwema usongo noma ukulwela amaphupho abo futhi bathembe ukuthi lesi simo sizolungiswa ngabezokuphepha.
Uma amanoveli kaJames Nava ebonakala ngokuthile, kungukuphakanyiswa kwamagugu wokushisekela izwe. Lokhu, okunzima kakhulu kwabangewona amaMelika ukukuqonda, kuthathwe kahle kule ndaba kangangokuba kungenze ngalulangazelela lolu hlobo lwesimo nomoya.
UNava udalula ukuqeqeshwa kwakhe kanye nesipiliyoni sakhe kwezempi lapho ebhekene nodlame lwamaphekula, engena kuzo zonke izinhlobo zemininingwane: ukwakheka kombutho wezokuphepha, ukusebenza kwamabutho amaphekula amaSulumane, izikhali, isu lezempi nezinye izinto eziningi.
Indaba ithola imizwa kancane kancane. Futhi kancane kancane iyasonga futhi ibambe. Incazelo, isenzo nomzwelo kuhlanganisiwe ngemithamo ehlukene, efanele umzuzu ngamunye.
Kuyo yonke inoveli singathola izincazelo ezinhle, ezisicwilisa endabeni futhi zisenze siyijabulele ngazo zonke izinzwa ezinhlanu. Izigcawu zesenzo ziyamangalisa. Futhi angibhekiseli kulabo ababhekene nobushokobezi kuphela. Indlela uNava abhekana ngayo nemicimbi yezemidlalo iyajabulisa.
Uma ufuna ukufundwa okujabulisayo nokwamanje, futhi ngasikhathi sinye okukhuthazayo, uzothanda Iphupho.
Ungakwazi Thenga Iphupho lapha
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Buyekeza: "Izwe Lamaphupho", nguJames Nava